Ruushka markii ugu horreeysey fasaxaya in Ukraine laga dhoofiyo agab muhim u ah caalamka (Shuruud uu wato) | Hadalsame Media
Home Arrimaha Caalamka Ruushka markii ugu horreeysey fasaxaya in Ukraine laga dhoofiyo agab muhim u...
Ruushka markii ugu horreeysey fasaxaya in Ukraine laga dhoofiyo agab muhim u ah caalamka (Shuruud uu wato)
(Moscow) 29 Maajo 2022 – Madaxwaynaha Ruushka ee Vladimir Putin ayaa Sabtigii khadka taleefoonka kula xiriirey Hoggaamiyaha Jarmalka ee Olaf Scholz iyo Madaxwaynaha Faransiiska ee Emmanuel Macron. Isaga oo Ukraine ku eedeeyey in ay hakisay wadahadalladii nabadeed, Putin waxa uu u xaqiijiyey dhigiisa in Moscow ay wali diyaar u tahay in wada xaajood lagu dhameeyo dagaalka socda, waxa uuna cambaareeyey reer galbeedka oo hub ku farraqay dalka Ukraine.
Sida lagu sheegay qoraal lagu koobay nuxurkii wada hadal oo uu daabacday Aqalka Kremlin-ku, Putin waxa uu soo bandhigay xaaladihii ugu dambeeyey ee wax uu ku sheegay ”howlgallada militari ee Ruushku ka wadaan Ukraine”, wuxuuna tilmaamay in noloshii caadiga ahayd ay ku soo laabatay Mariupol iyo magaalooyin kale oo dhowaan laga qabsaday ciidamada Ukraine.
Putin ayaa xaqiijiyey in Ruushku uu u furan yahay heshiis nabadeed oo laga wada xaajoodo, uuna diyaar u yahay inuu xitaa dalkaa u dhoofiyo agabka bacriminta iyo wax soo saarka kale ee beeraha, balse tani ay u baahan tahay in marka hore Ruushka laga qaado cunaqabataynta qaar ay reer Galbeedku saareen. Waxa uu sidoo kale sheegay in Ruushku uu hubaal ka dhigi doono in dhoofinta xabuubka Ukraine sida qamadiga iyadoo weliba laga shixnadayo dekedaha Ukraine ee ku yaal Badda Madow oo aan iminka cidina geli karin rukhsadda Ruushka la’aanteed.
Ilaa dhowaantan, dhoofinta noocaan ah ayaan macquul ahayn sababtoo ah Ukraine waxay ku doodaysaa in Ruushku uu bad-xirey dalkooda, halka Moscow ay ku andacoonayso inay Ukraine iyadu bilowday inay miinayso xeebaha badeeda, sida laga soo xigtey Moscow.
Si kastaba ha ahaatee, Ciiddanka Badda ee Raashiya ayaa waxay furteen labo marin-badeed oo ay maraan maraakiibta Rayidka ah, kuwaasi oo mid ka mid ah uu yahay Badda Madow iyo mid kalena waa Badda Azov.
Qoraal ay soo bandhigeen dhinaca Jarmanka oo ku saabsan wada hadalkan khadka telefoonka ayaa lagu sheegay in Scholz iyo Macron labaduba ay ku boorriyeen Putin inuu ku dhawaaqo xabbad joojin degdeg ah islamarkaana uu ciidamada Ruushka ka saaro Ukraine.
Labada hoggaamiyeba waxay isku raaceen inay weji wanaagsan kala kulmeen Putin oo uu aqbalay inuu ula dhaqmo dagaalyahannada Ukraine laga qabtay “sida waafaqsan sharciga caalamiga ah ee bini’aadminnimada,” iyo in galaangal loo oggolaado Guddiga Caalamiga ah ee Laanqeyrta Cas si aan xaddidnayn.
Previous articleArrin halisteeda leh oo si tarab tarab ah uga soconaysa Puntland (Dal ay DF Somalia arrintan kala hadli karto)
Next articleDal Muslim ah oo soo bandhigay wax ka badan 100 daroon oo heegan ah oo ku jira dhulka hoostiisa + Sawirro